သတင်း - လိမ္မော်ခွံ၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ဆိုးကျိုးများ
တန်ခွံနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ပို၍အဖြစ်များပြီး ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည့် ဖျော်ရည်ကို ရေတိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် ကျိုချက်နိုင်သည်။ဒီနေ့Fuyang Besttopမင်းနဲ့ ဒီအကြောင်းကို ပြောလိမ့်မယ်။
လိမ္မော်ခွံရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ။
1.လိမ္မော်ခွံအဓိကအားဖြင့် မငြိမ်မသက်သောအဆီ၊ hesperidin နှင့် အခြားသော အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သောကြောင့် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းကို ညင်သာစွာ လှုံ့ဆော်ပေးကာ အစာခြေရည်များ ထုတ်ပေးခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးကာ အူလမ်းကြောင်းအတွင်း ဓာတ်ငွေ့များ စုပုံနေခြင်းကို အချိန်မီ ဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့် လူတို့၏ အစာစားချင်စိတ်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ လိမ္မော်ခွံရှိ သံပုရာသီးကဲ့သို့ ခါးသောဒြပ်စင်များသည် အူလမ်းကြောင်း peristalsis ၏အရှိန်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သောကြောင့် အစာချေဖျက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
2.လိမ္မော်သီးအခွံသလိပ်များကို ပြေပျောက်စေပြီး ချောင်းဆိုးခြင်းကို သက်သာစေခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာ ၎င်းတွင် အဆုတ်နှင့် လေလမ်းကြောင်းအတွင်း ရောင်ရမ်းမှုကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့် သဘာဝ ရောင်ရမ်းမှု တိုက်ဖျက်ရေး ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သောကြောင့် ချွဲသလိပ်များကို ဖျော့ဖျော့နှင့် မြန်မြန် ဖယ်ရှားနိုင်စေသည့်အပြင် မတည်ငြိမ်သော၊ အဆီပါဝင်မှုသည် လူ့အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ချောင်းဆိုးခြင်းအကြိမ်ရေကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။သလိပ်အများကြီးခံစားရရင် လိမ္မော်ခွံ၊ ဂျင်းနဲ့ သစ်ကြားသီးတွေကို ပြင်ဆင်ပြီး သင့်လျော်တဲ့ရေပမာဏကို ထည့်ပြီး သလိပ်ပျော်စေတဲ့ အာနိသင်ရှိတဲ့ ဖျော်ရည်ကို သောက်ပါ။လည်ချောင်းနာတဲ့သူတွေအတွက် အခွံကို ချေဖျက်ပြီး လည်ချောင်းနာတာကို သက်သာစေဖို့ သောက်နိုင်ပါတယ်။
3.လိမ္မော်ခွံlipid peroxidation တုံ့ပြန်မှုကို ထိထိရောက်ရောက် ဟန့်တားနိုင်သော glycosides အများအပြားပါဝင်သောကြောင့် အချို့သော lipid-lower effect ရှိသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အခွံရှိ pectin တွင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ သွေး lipids အဆင့်ကို ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ချပေးနိုင်သော မော်လီကျူးအချို့ နည်းပါးသော အရာများ ပါဝင်ပါသည်။သင့်တွင် သွေးတွင်းအဆီဓာတ်များနေပါက အခွံကို သင့်လျော်သလို စားသုံးနိုင်သည်။
လိမ္မော်ခွံရဲ့ အာနိသင်က အများကြီးဆိုပေမယ့် လူတိုင်းစားသုံးလို့မရပါဘူး၊ အထူးသဖြင့် ဒီအမျိုးအစား (၄)မျိုးအောက်မှာ လူတွေ သတိထားရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
1. ဖျားခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် ခံတွင်းခြောက်နေသူများသည် ရောင်ရမ်းမှုကို အလွယ်တကူဖြစ်ပေါ်စေပြီး အခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသည့် လိမ္မော်ခွံကို စားသုံးရန် အကြံပြုထားသည်။
2.အခွံက ခြောက်သွေ့ပြီး စိုစွတ်နေတဲ့ အာနိသင်ရှိတာကြောင့် ချောင်းခြောက်ဆိုးတာ၊ အစာအိမ်မီးနဲ့ qi ချို့တဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေနိုင်တာကြောင့် သတိထားသင့်ပါတယ်။
3. အချို့သောဆေးဝါးများကိုသောက်သုံးနေပြီး ရေတွင်လိမ္မော်ခွံကိုအသုံးပြုလိုသူများသည် ဆေးဖက်ဝင်အင်ဇိုင်းများကိုထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့် ဆေး၏ထိရောက်မှုကိုဖြစ်စေသောကြောင့် သင့်ဆရာဝန်နှင့် ဦးစွာတိုင်ပင်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
4.ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ လိမ္မော်သီးအခွံကို စားသုံးရာတွင် သတိထားသင့်သည်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း ပျို့အန်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းနှင့် အစာစားချင်စိတ် ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီး လိမ္မော်ခွံသည် အဆိုပါ လက္ခဏာများကို ကောင်းစွာ ကောင်းမွန်စေသောကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီး အများအပြားသည် လိမ္မော်ခွံကို စားသုံးရန် ရွေးချယ်လာကြသည်။သို့သော်လည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာသည် Qi ချို့တဲ့ခြင်းနှင့် ခြောက်သွေ့ခြင်း သို့မဟုတ် Yin ချို့တဲ့ခြင်းနှင့် ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါက လိမ္မော်ခွံကို စားသုံးသည့်အခါ ပိုမိုသတိထားရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ လိမ္မော်ခွံက သန္ဓေသားအပေါ် အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
လိမ္မော်ခွံကို ဘယ်လို မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးမလဲ။
1. လိမ္မော်ခွံကို ရေထဲမှာ နေ့တိုင်းသောက်ဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး၊ အထူးသဖြင့် ယဉ်ပါးပြီး အတွင်းပိုင်း အပူရှိန်မရှိတဲ့သူတွေ၊ယေဘူယျအားဖြင့် တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ် လုံလောက်ပါသည်။
2. အကယ်၍ သင်သည် လိမ္မော်ခွံ၏အကူအညီဖြင့် ရောဂါတစ်ခုခုကို ကုသလိုပါက၊ လိမ္မော်ခွံနှင့် ပမာဏပေါင်းစပ်မှုအတွက် တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များရှိသောကြောင့် ဆရာဝန်၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ကုသခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ လိမ္မော်ခွံ၏ နိဒါန်းအချို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး Fuyang Bestop သည် အထက်ဖော်ပြပါ နိဒါန်းကို ဖတ်ရှုပြီးနောက် တစ်စုံတစ်ရာ ရရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
လိမ္မော်သီးကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးပြုပြီး ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။info@goherbal.cnအမြန်ဆုံး။